यी युवकले बनाए पेटलाई खुत्रुके, पेटभित्र भेटिए ७२ वटा सिक्का - dsnews
यी युवकले बनाए पेटलाई खुत्रुके, पेटभित्र भेटिए ७२ वटा सिक्का
के कुनै मानिसले आफ्नो पेटलाई खुत्रुके बनाउन सक्छ ? सक्दो रहेछ त ! भारतमा एकजना व्यक्तिको पेटबाट ७२ वटा सिक्का फेला परेपछि यस्तो रहस्योद्घाटन भएको छ । त्यसपछि उनको पेटको शल्यक्रिया गरी भित्रको त्यो कडा पदार्थ निकालियो । जब डाक्टरहरुले पेटभित्र रहेका कडा पदार्थहरु बाहिर निकाले, तब उनीहरु अचम्ममा परे ।
ती व्यक्तिको पेटभित्रबाट ७२ वटा सिक्का निकालिएको थियो ।भारतको महाराष्ट्रस्थित पालघर जिल्लामा एकजना व्यक्तिको पेट सहनै नसक्ने गरी दुख्यो । त्यसपछि उनी पेटको उपचार गर्न भनी अस्पताल गए । अस्पतालमा गएर डाक्टरहरुले उनको पेटको एक्सरे गरी जाँच गर्दा पेटभित्र असामान्य रुपमा धातुजन्य पदार्थहरु रहेको पत्ता लगाए ।
कृष्ण सोमलया साम्बर नामक ५० वर्षका ती व्यक्ति दुर्लभ रोग मेटलोफगियाबाट पिडित छन् । यो रोग लागेका मानिसहरुमा धातुजन्य पदार्थ खाने बानी हुन्छ । यो एक प्रकारको मानसिक असन्तुलनको अवस्था हो । सोही कारण कृष्णले लामो समयदेखि सिक्का निल्ने गरेका थिए । जसका कारण उनको पेटभित्र ७२ वटा सिक्का जम्मा भएछन् ।
पछिल्लो २० वर्षदेखि उनी यो रोगबाट पीडित रहेको बताइएको छ । यसक्रममा उनले सुन, चाँदी तथा फलामका धेरै चिजहरु खाइसकेका छन् । स साना टुक्राहरु दिसासँगै बाहिर निस्केपछि ठूला सिक्काहरु उनको पेटभित्रै अड्किए । पेटमा ठूलो मात्रामा सिक्का जम्मा भएपछि उनलाई असह्य पीडा हुन लाग्यो र अन्ततः डाक्टरकोमा उपचारका लागि पुगे । डाक्टरहरुले झण्डै ४ घण्टाको शल्यक्रियाबाट उनको पेटमा रहेका ७२ वटा सिक्का निकाल्न सफल भए । एजेन्सी
Previous यस्तो ग्रह, जहाँ ७ घण्टाको एक वर्ष हुन्छ
Next पेन्टी र ब्रा निहुँमा पतिसँग डिभोर्स
विचित्र मन्दिर, जहाँ सुन्दर पत्नीका लागि पुरुषले गर्छन् सिँगारपटार
पेटले थिचेर प्रेमीको हत्या ! पुलिसकै होस उड्यो
मन्दिरमा नग्नता प्रदर्शन गर्ने युवती गिरफ्तार